Siyaasadda Kukiyada ›Blog de Juan Herranz
Iyadoo la raacayo qodobbada qodobka 22.2 ee Sharciga 34/2002, ee Juulaay 11, ee Adeegyada Bulshada Macluumaadka iyo Ganacsiga Elektarooniga ah, Mulkiiluhu wuxuu ku wargelinayaa in website-kani uu isticmaalo cookies, iyo sidoo kale siyaasaddiisa ururinta iyo daaweynta iyaga. .
Kukigu waa fayl yar oo fudud oo lala soo diro boggaga mareegahaan iyo browserkaagu buskugu waa fayl lagu soo dejiyo kombayutarka marka aad gasho boggaga internetka qaarkood. Kukiyadu waxay u ogoladaan bogga internetka, iyo waxyaabo kale, inuu kaydiyo oo soo saaro macluumaadka ku saabsan caadooyinkaaga wax baadh, iyadoo ku xidhan macluumaadka ay ka kooban yihiin iyo habka aad u isticmaasho qalabkaaga, waxaa loo isticmaali karaa in lagu aqoonsado.
3. Noocyada buskudka ee la isticmaalo
Goobta www.juanherranz.com waxay isticmaashaa noocyada soo socda ee cookies:
Kukiyada Falanqaynta: Iyagu waa kuwa, ay sifiican ula dhaqmaan websaydhka ama dhinacyada saddexaad, oo u oggolaanaya tirada isticmaaleyaasha in la tirakoobo sidaasna ay ku fuliyaan cabbirka tirakoobka iyo falanqaynta isticmaalka ay sameeyeen adeegsadayaasha websaydhka. Tan awgeed, marinka aad ka sameyso degelkan waxaa lagu falanqeynayaa si loo hagaajiyo.
Kukiyada saddexaad: Mareegtan waxay isticmaashaa adeegyada Google Adsense oo ku rakibi kara cookies u adeega ujeedooyinka xayaysiiska.
4. Dhaqdhaqaaqa, barkinta iyo baabi'inta buskudka
Waad aqbali kartaa, xannibi kartaa ama tirtiri kartaa cookies-ka lagu rakibay kombuyutarkaaga adiga oo habaynaya ikhtiyaarrada biraawsarkaaga. Xidhiidhada soo socda waxaad ka heli doontaa tilmaamo awood u leh ama la joojiyo cookies-ka daalacashada ugu caansan.
Google Chrome: Halkan
5. Digniin ku saabsan tirtiridda cookies
Waxaad ka tirtiri kartaa oo aad xannibi kartaa cookies-ka boggan, laakiin qayb ka mid ah bogga si sax ah uma shaqeyn doonto ama waxaa laga yaabaa in tayada ay saameyso.
6. Faahfaahinta xiriirka
Su'aalaha iyo / ama faallooyinka ku saabsan siyaasaddayada buskudka, fadlan nala soo xiriir: